Kutheni uThixo engamtshabalalisi umtyholi? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kutheni uThixo engamtshabalalisi umtyholi? El usathana yingelosi egqibe ekubeni ingamthobeli uThixo. Umsebenzi wakhe kwimbali yonke ibikukuzama ukuvusa ezona mvakalelo zimbi zomntu ukuze zimphambukise kwindlela elungileyo yobomi obungunaphakade. Yi isimntwiso sobubi kwi el mundo.
Wonke umKristu uyasazi isibalo sikaMtyholi, nangona kunjalo, bambalwa abasiqondayo isizathu sokuba uThixo, ekubeni enguMdali wakhe kunye noyena mntu unamandla kwindalo, angamtshabalalisi ngonaphakade. Ngesi sizathu, ukusukela Fumanisa kwi-intanethi Siza kuzama ukunika unobangela osengqiqweni kulo mbuzo.
1 Kutheni uThixo engamtshabalalisi umtyholi? Ibangelwa yintoni?
1.1 1. Ukuba uThixo uyamtshabalalisa uMtyholi, kufuneka amtshabalalise umntu
1.2 UMtyholi uza kutshatyalaliswa ngexesha elifanelekileyo
1.3 3. UThixo usebenzisa uMtyholi ukusibonisa indlela elungileyo
Kutheni uThixo engamtshabalalisi umtyholi? Ibangelwa yintoni?
Unobangela wokuba kutheni uThixo angamtshabalalisi uMtyholi
Ibhayibhile ayichazi ukuba kwakutheni ukuze uThixo angamtshabalalisi kwangoko uMtyholi, kodwa ithi ngenye imini uyakumtshabalalisa. UThixo unexesha elifanelekileyo layo yonke into. Ngoko ke, usathana uya kufumana isohlwayo sakhe.
1. Ukuba uThixo uyamtshabalalisa uMtyholi, kufuneka amtshabalalise umntu
Xa umtyholi wavukela uThixo, akazange atshatyalaliswe kwangoko. Kwenzeka into efanayo nakuAdam noEva xa bonayo. Ukuba uThixo wayemtshabalalisile uMtyholi kwangoko, ngewayenyanzelekile utshabalalise uAdam noEva (Nabo bonke abonayo) kwangoko. UThixo akathandi ukubona izidalwa zakhe zitshabalala. Ufuna ukunika wonke umntu ithuba lesibini.
UMtyholi uza kutshatyalaliswa ngexesha elifanelekileyo
UThixo uyamvumela usathana ukuba aqhubeke ukubakho ixesha elithile, kodwa usathana sele egwetyiwe. Ulahlile ngokupheleleyo uThixo, akaguquki, kwaye wenza abanye bone. Ke ngoko, ngexesha elifanelekileyo uya kufumana isohlwayo esimiswe nguThixo.
UThixo akamtshabalalisi uMtyholi okwangoku ngenxa yokuba enomonde. UMtyholi iyakutshatyalaliswa ngomhla womgwebokunye nabo bonke abangaguqukiyo kwizono zabo. Loo mini ayikafiki kuba uThixo akafuni ukuba kufe nabani na. Ufuna wonke umntu abe nethuba lokuguquka. Vula ityala Okokugqibela onke amathuba anokwenzeka agqityiwe.
Ngenxa yoko yibani nemihlali, nina mazulu, nani ninomnquba kuwo! Yeha, abo bawumiyo umhlaba nolwandle! Ngenxa yokuba uMtyholi wehlele kuwe enomsindo omkhulu, esazi ukuba ixesha analo lincinci.
Eyesi-2 kaPetros 3: 9-10
3. UThixo usebenzisa uMtyholi ukusibonisa indlela elungileyo
Kude kufike umhla wesohlwayo sakhe, uMtyholi unamandla alinganiselweyo emhlabeni. Zama ukwahlula abantu kuThixo kwaye ubameme ukuba bone, kodwa uThixo uyazi yonke into ayenzayo usathana ngokuchasene naye kwaye nezicwangciso zakhe zinkulu kakhulu. UThixo ude asebenzise imisebenzi kaSathana ukufezekisa injongo yakhe! Umtyholi akanakuphazamisa izicwangciso zikaThixo.
Icebo likaYehova limi ngonaphakade; Iingcinga zentliziyo yakhe kwizizukulwana ngezizukulwana.
I-Psalm 33: 11
Umtyholi ubangela iingxaki ezininzi emhlabeni, kodwa uThixo ubonakalisa ukuba uthando lwakhe lunamandla ngakumbi. UMtyholi isibonisa ukuba linjani ilizwe elingenaThixo. UThixo usibonisa ukuba linjani ilizwe elibuyiswe luthando lwakhe. UThixo akonwabanga yimisebenzi kaMtyholi, kodwa uyayisebenzisa ukusibonisa ukuba indlela yakhe ingcono.
Kodwa umthetho waziswa ukuze isono sande; ke kuthe, sanda isono, lwaphuphuma ngakumbi ubabalo; Ke, kwanjengokuba isono salawula njengokufa, ngokunjalo nobabalo lulawula; Ubulungisa ngobomi obungunaphakade, kuYesu Kristu iNkosi yethu.
KwabaseRoma 5: 20-21
Kube njalo! Ndiyathemba ukuba uyayiqonda kutheni uThixo engamtshabalalisi umtyholi. Ukuba ngoku ufuna ukwazi ukuba linjani ihlabathi lemimoya ngokutsho kweBhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.
Kwakutheni ukuze uThixo adale umtyholi?